Izindaba - Isilayishi samasondo esingu-3tons esinenjini ye-WEICHAI 92KW, i-ZL30 esetshenziswa isilayishi samasondo
I-FORLOAD brand 3tons wheel loader, i-ZL30 model 3000kgs mini wheel loader ihlale ihlomisa nge-Weichai six cylinder engine engu-92KW enamandla, ibhakede lingu-1.5m3 futhi ngezinye izikhathi ngokwesicelo sekhasimende lingenza u-1.8m3 noma ngaphezulu.
I-FORLOAD yohlobo lwe-3t wheel loader inamandla amakhulu okusebenza namandla kagandaganda, isiguquli se-torque sisebenzisa uhlobo lwe-shaft yokulungisa ikhwalithi eqinile kanye negiya elilula lokushintsha.I-axle yokulayisha amasondo eyimodeli ye-ZL30 yakhiwe ngensimbi eqinile nazo zonke izinciphisi eziyinhloko ezikhiphayo, ithuthukisa impilo ephelele yokulayishwa kwamasondo.
Ngokusho kwesizinda sendawo esisebenza kanzima, nabasebenzisi abahlukene banezicelo ezihlukene zokunamathiselwa kwesilayishi samasondo, ngakho-ke isilayishi samasondo se-FORLOAD somkhiqizo we-ZL30 3ton singase sibe nezithandani ezisheshayo noma izimfoloko, ukubanjwa kwezinkuni, ukubamba utshani, ibhakede elingu-4in1 ngisho nebhakede lamalahle neqhwa leqhwa.
Futhi injini yokulayisha amasondo, inkampani ye-FORLOAD ikhetha njengesicelo semakethe yasendaweni yamakhasimende, ikakhulukazi ngaphandle komkhiqizo we-WEICHAI, singasebenzisa injini ye-CUMMINS noma injini ye-PERKINS, okuyinjini edumile emhlabeni wonke enekhwalithi ephezulu, izingxenye eziyisipele futhi emakethe inesikhungo sesevisi.
I-FORLOAD wheel loader yalo mthamo ongu-3tons, ikhabethe iwuhlobo lwe-ROPS/FOPS, ngesikhathi esifanayo ihlomisa nge-heater eqinile, ifeni, ikhamera engemuva kwesikrini esikhulu, isihlalo esimisiwe, isilawuli se-hydraulic joystick, konke lokhu kulungiselelwa kuthuthukisa ukunethezeka komsebenzisi.
Inkampani ye-FORLOAD ingakunikeza cishe izinhlobo zemishini yokwakha imigwaqo, okuhlanganisa isilayishi samasondo, isilayishi samasondo esincane, isilayishi samasondo sikagesi, isilayishi sesondo se-backhoe, i-TLB, isilayishi sesondo se-telescopic, i-4WD rough terrain forklift, i-forklift kagesi, i-forklift kaphethiloli, i-motor grader, i-bulldozer, i-crawler excavator, isitshalo sokuxuba ukhonkolo esihambahambayo njll.